Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Dalxiiska Wiyisha ayaa lagu soo bandhigay Tansaaniya Mkomazi Park
dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Beerta Qaranka ee Mkomazi ee Waqooyiga Tansaaniya waxaa loo calaamadeeyay Dalxiiska Wiyisha, iyadoo lagu bartilmaameedsanayo dalxiisayaasha xiiseynaya inay daawadaan Wiyisha madow ee Afrika ka hartay, oo hadda ah xayawaanka duurjoogta ee adduunka ugu khatarsan.
Wasiirka Kheyraadka Dabiiciga iyo Dalxiiska ee Tansaaniya, Dr. Damas Ndumbaro, ayaa Arbacadii toddobaadkan ka bilaabay Dalxiiska Rhino Mkomazi National Park.
Wasaaraddu waxay rajeyneysaa inay bartilmaameedsato oo ay soo jiidato dalxiisayaasha xiiseynaya inay u safraan sawirada wiyisha.
Wasiirka ayaa sheegay in soo bandhigida Dalxiiska Wiyisha ay qeyb ka aheyd qorshaha dowlada Tanzania.
Bartilmaameedka dowladda ayaa ah inay soo jiidato 5 milyan oo dalxiisayaal ah taas oo markaa kordhin doonta macaashka dalxiis ee hadda laga helo $ 2.6 bilyan illaa $ 6 bilyan sannadka 2025.
Waxay ku taal Waqooyiga Dalxiiska Dalxiiska Tansaaniya una dhow Mount Kilimanjaro, Beerta Qaranka ee Mkomazi waxaa loo dejiyey inay tahay Rhino Sanctuary oo dalxiisayaasha adduunka oo dhami ay booqan karaan ka dibna u arki karaan wiyisha madow ee Afrikaanka ah ee dhifka ah ee lagu ilaaliyo gudaha baarkinka.
Mkomazi waxaa hoos imanaya maamulka Jardiinooyinka Qaranka Tansaaniya (Tanapa). Waxay ku taal meel 112 km bari ka xigta magaalada Moshi ee gobolka Kilimanjaro, inta udhaxeysa wareegyada safari ee waqooyiga iyo koonfurta.
Dalxiiska wiyisha waxaa si fudud loogu biirin karaa socodka buuraha Usambara ama Pare ee deriska la ah iyo maalmo kooban oo lagu nasto xeebta Badweynta Hindiya ee Zanzibar.
Ilaalinta wiyisha waa bartilmaameed muhiim ah oo ay muxaafidiinta u raadinayaan inay hubiyaan ku noolaanshahooda Afrika ka dib ugaarsi ba'an oo soo wajahday tiradooda tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
Wiyisha madow waxay ka mid yihiin xayawaannada ugaarsiga iyo khatarta ugu badan ku haya Bariga Afrika iyada oo dadkooduna ay ku sii yaraanayaan heer aad u xun.
Isaga oo eegaya buurta Kilimanjaro waqooyiga iyo Beerta Qaranka ee Tsavo West ee Kenya dhanka bari, Mkomazi park hadda waa beertii ugu horraysay ee duurjoogta ah ee Bariga Afrika ee ku takhasustay dalxiiska wiyisha.